HomeAfaan OromooAjajaa police Oromia Solomon Taaddasee Eenyutuu Ajjeessee?
Via Yaha Bashir
#Inbox Ajjechaan Ajajaa police Oromia Solomon Taaddasee fi Wayillan isaa irratti guyyaa har’a osoo isaan nyaata nyaatanii Buraayyuutti tahee adda durummaan kan raawate
Wal qoccolloon Taye Dandea fi Komander Solomoon jiddu turee bubbuleera. Wal dhabdeen isaanii kan jalqabe yeroo Waajjirri ABO Buraayyuutti banamee ture.
#Taye #Dandea Buraayyuutti ABOn waajjira akka hin bananne, yoo banate ammoo Ummatni bahee akka hin eebbisiisne ugguramu qaba jedhe commander #Solomonitti bilbilee hime.
Commander Solomoon #Taye #Dandea dhaan Seeraan hojjenna yoo tahee Seerrii paartiilee siyaasaa karaa nagahaa socho’an maraaf qixa dalaga waan taheef Ugguramuu hin qaban, rakkoon yoo jiraateef Polisiin ramadamee eegama jechuun Taye Danda’aaf deebii kenne.
Tayyeen aariidhaan Baajata poliisii isaan eeguuf baastu kiisha kee keessaa baasta yoo tahee haa tahu garuu Mootummaan isaan eeguudhaaf baajata ramadu hin qabu jechuun itti deebise.
Commander Solomoon deebisuun Baajatni isaanif jecha addatti ramadamu hin jiru, poliisiin hojii idilee isaa hojjechuuf bobbaa’a, nageenya ummataa eeguun ammoo gahee poliisiiti. Kanaaf nageenya eeguuf eegsiisuun gahee keenya qaama biraa waan galchuu hin qabu jechuun Taye Dandea afaan qabsiisee.
Isa booda Dammallash Gabramika’el, Commander Solomoon Taddasetti bilbiluun waan ajajamtee ni raawwatta moo hin raawwattu jechuun dorsiisuu barbaade, Solomoon, akkas jedhe?
Si dhimma police Oromia keessa maaltu sii galche Jechuun gaafate?
Dammallash Gabramika’el deebisuun yoo ati ajaja sitti kenname hin raawatiin nageenya Ummataa eeguuf jecha jidduu seenna jedheen
Commander Solomonis deebisee erga tahee qaama atii ajajjuus ibidda baata Policiin Oromiyaas ibidda baata waan taheef osoo gahee hojii kee beekte gaariidha jechuun karuma nagaa deebiseef.Erga gaafa sanaa jalqabee Commander Solomoon garee Taye Dandea Aredo fi Dammallash Gabramika’eliin adamfamaa turuu isaa hiriyyootni isaa danuun quba qabu.
Taye Denda’a (Left), Prosperity Party Communication Head in Oromia. Demelash Gebremichael (Right), National Intelligence and Security Services (NISS) Director
Warri shakkii qabdan kunoo hubadhaa shira nafxanyootaa kan oromoo waliin dhawee adda facaasuu barbaadu firraa arkaa